Muchena Dhonza Pasi Kicheni Faucet
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Muchena Dhonza Pasi Kicheni Faucet
WOWOW Muchena Dhonza Pasi Mukombiki Faucet
Uri kutsvaga kumusoro kune inoshanda asi yakapusa uye yakanaka yekicheni pombi? Kana chiri chokwadi, saka zvirokwazvo waburitsa pachena sarudzo chaiyo!
Iyi tepi yekicheni iri nyore asi ine hushamwari nharaunda. Iyo ine matte chena mumvuri uye inouya neyakareruka kwazvo Hardware. Iyi dhizaini yakanatswa yakakodzera zvakanyanya kune ingangoita yega yega yekutanga chiyero chekicheni kutenderera.
Iyi faucet yekicheni ine yepamusoro-arch gooseneck spout. Iyi spout inogona kuwedzera swivel zvakanyanya kunge mazana matatu nematanhatu. Nekudaro, iyo mvura inogona kusvika kune yako yakazara sink. Izvi zvichawedzera nyaradzo yevatengi.
Chigadzirwa chinongoiswa mukati uye pasina mubvunzo mutengo wekutenga odha. Iyo zvakare ine nyore muviri uye ine yakaringana strain yemvura kutenderera.